Weather in Bali in Jolay ~ Journey-Assist - Fety tany Bali amin'ny volana Jolay
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Toetr'andro sy Bali » Weather in Bali amin'ny Jolay
Weather in Bali amin'ny Jolay
Fampahalalana ankapobeny momba an'i Bali
Manofa fiara na bisikileta (scooter) any Bali
Masakan'i Bali, sakafo
Fifanakalozana fifanakalozana amin'ny bali. Banks, fifanakalozana
Voankazo Bali. Fizaran-taona.
Inona no tokony hatao any Bali
Ahoana ny fomba mankany Bali. Jeografia, seranam-piaramanidina
Ny volana jolay any Bali no misy ny tampon'ny tampony amin'ny vanim-potoana avo any Bali. Amin'ny alàlan'ny fitsipi-pitenenana rehetra, izany no volana mahay mandanjalanja hitsidika an'i Bali. Manararaotra fialantsasatra amoron-dranomasina, fitsangantsanganana mavitrika any an-tendrombohitra, na mitsidika ireo toerana manintona sy kolontsaina voajanahary, na midi-drano na mibolisatra…. Amin'ity volana ity dia misy fepetra ilaina amin'izany rehetra izany. Azonao atao ny misafidy soa aman-tsara mandeha amin'ny bisikileta manodidina ny nosy tsy misy orana be.
Ny mari-pana dia mihena ny manodidina ny 30 ° C mandritra ny andro ary tsy milatsaka ambanin'ny 23 ° amin'ny alina. Angamba ireo no mari-pana mafana indrindra ho an'ny vanim-potoana mahafinaritra.
Ny mari-pana sy ny fialantsasatra amoron-dranomasina
Ny rano ao amin'ny ranomasina amin'ny Jolay dia misy hafanana 27 °, izay mari-pahaizana roa ambany ambany noho ny fiakaran'ny mari-pana eo amin'ny mari-pana isan-taona, fa ampy ho an'ny fijanonana maharitra ao anaty rano. Ny rivotra tamin'ny volana Jolay dia milamina ary azo tanterahina, ny onja na aiza na aiza afa-tsy ny toerana onenan'i Bali dia azo antoka hilomano, tsy misy fika miverina, ka tsy misy manakana ny fialantsasatra amoron-dranomasina tsara.
Fanetren-tena tamin'ny Jolay
Ny fanetren-tena any Bali amin'ny Jolay dia ambany. 60% izany. Io no iray amin'ireo taha ambany indrindra ao anatin'ny taona. Volana tsara hiakatra an-tendrombohitra, izay hahafinaritra anao ny panoro tsy rakotry ny rahona.
Varatra any Bali ny volana jolay
Tsy fahita firy ny orana amin'ny volana Jolay. Tsy hita isa ny statistika ary manondro andro 4 be rahona sy orana mety misy mandritra ny volana. Ary ny orana amin'ity 4 andro ity, raha manao izany izy ireo, amin'ny alina, ary mahalana vao maharitra adiny roa ny faharetany.
Surf surf jolay
Ny volana jolay dia volana tsara ahafahan'ny mpandeha ao Bali. Ao ny fepetra ilaina rehetra amin'ity fanatanjahantena ity. Mandeha tanteraka ihany koa ny asan'ny surf surf.
Toetr'andro any Bali
Ity ambany ity ny fantsom-pifandraisana. Safidio ny sosona rehetra (onjan-drivotra, rivotra, kotrokorana, mari-pana, sns ..) ary afaka mahita ny toetry ny andro misy ankehitriny any Bali ianao, ary koa mahita vinavina mandritra ny andro maromaro mialoha.
Coat of arm of Bali
Bali - Faritanin'i Indonesia
Renivohitra - Jakarta
Fiteny - indonezianina
Bali Currency - Rupiah indonezianina (IDR)
Telefaona azo ampiasaina any Bali
Fotoana Bali (GMT + 8)